बाढी अवलोकन गर्न गाउँ पुगेका मन्त्री आँफै फसे`पछी यसरी गरियो उद्दार
August 8, 2021 420
मध्य प्रदेशका गृह`मन्त्री नरोत्तम मिश्रा बुधबार दतियाको बाढी प्रभा`वित गाउँमा रेस्क्यू अप`रेशनको अवलोकन गर्न पुगेका थिए । तर, उनी आफै फस्न पुगेका थिए । पछि एयर`फोर्सको टोली`ले उनलाई एयर`लिफ्ट गरेर बाहिर निका`लिएको थियो ।
नरोत्तम मिश्रा दतियामा एनआरडीएफ को मोटर`बोटमा लाइफ ज्याकेट लगाएर बाढी प्र`भावित कोटरा गाउँ पुगेको थिए । उनले एक घरमा केही मानिस`हरु फसेको देखे`पछि आफै छतमा चढे । एस`आरडीएफले त्यहाँ फसेका सबैलाई सुरक्षित उद्धार गरे । तर, गृह|मन्त्री आफै फसे ।
पानीको बहाव तीव्र भएका का`रण मोटरबोट पनि त्यहाँ पुग्ने स्थि`ति बनेन । पछि एयर`फोर्सको टोली पुगेर गृहमन्त्रीको उ`द्धार गरेको थियो । मन्त्री`भन्दा अघि चार जना स्थानीय`हरुलाई उद्धा`र गरेर सुरक्षित स्थानमा पुयाइएको थियो ।
सिन्ध नदीमा बाढी कारण तटीय क्षेत्रमा रहेका गाउँमा पानी पसेको छ । नदीको जलस्तर बढेको कारण इन्दर`गढ क्षेत्रको रुर र कुलैथ गाउँबीच सम्पर्क टुटेको छ । शिव`पुरी ड्यामबाट पानी छाडि`एका कारण सिन्ध नदीको जलस्थर उच्च रहेको छ ।
Prevआमाबाबुलाई देशनिकाला गरेपछि नेपालमै जन्मेका थिए किरण, यस्तो छ उनको जीवन संघर्ष
Nextह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्
अस्ट्रेलियामा चोरलाई च’क्कु लिएर लखे’ट्ने यी साहसी नेपाली चेली, यसरी लखेटिन् (भिडियो)
बिनयकी हुनेवाला श्रीमती भन्छिन्, ‘बिनयको लागि म यो जुनीनै कुर्न परे पनि तयार छु’ (भिडियो सहित)
शेरबहादुर तामाङ सहित उनकी श्रीमती पनि ओली क्याम्पमा प्रवेश गर्ने !
योगेश भट्टराई सवार गाडीले रौत’हटमा साइकल यात्री लाई ठक्क’र दियो…
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (100050)